को होला अस्ट्रेलियाको नयाँ प्रधानमन्त्री ? नेपाली समुदायको समर्थन कसलाई ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १६ असार २०७३, बिहीबार १५:३६ |
अस्ट्रेलियामा नेपाली समुदाय निकै नयाँ भएपनि नेपालीहरु बलियो रुपमा स्थापित भइरहेका छन् । ‘वर्किङ फेमेली’ भएकाले नेपालीहरुलाई राज्यको सहयोग निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यही कारण, विस्तारै अस्ट्रेलिया आएका नेपालीहरु पनि राजनीतिक पहुँच स्थापित गर्न कस्सिएर लागेका छन् ।
आगामी २ जुलाईमा हुने केन्द्रीय चुनावले अस्ट्रेलियाको ३० औं प्रधानमन्त्री चुन्नेछ । अस्ट्रेलियाको संघीय संसदको हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ र सिनेट दुवै सदनको लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।
हालै भएका मत सर्वेक्षणहरुले कुनै पनि दलले प्रष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने देखाएको छ । चुनावी प्रचारको एक हप्ताभन्दा कम समय बाँकी रहँदा सत्तारुढ लिभरल नेसनल गठबन्धन र विपक्षी लेबर तथा ग्रिन्स बहुमतको नतिजा निकाल्न मार्जिनल सिटहरुलाई लक्षित गरेर प्रचारमा सक्रिय भएका छन् । पछिल्ला मत सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने अबको एक हप्ताभित्र वर्तमान प्रधानमन्त्री माल्कम टनबुल अत्यन्त झिनो मत अन्तरले दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।
यद्यपी, एक दर्जनभन्दा बढी मार्जिनल क्षेत्रहरुमा मतदाताहरुको पछिल्लो दिनसम्मको मनस्थिती परिवर्तनले उक्त अनुमानित नतिजालाई निकै ठूलो असर गर्नेछ । खासगरी पश्चिम सिड्नी, भिक्टोरिया, क्वीन्सल्याण्ड र वेस्टर्न अस्ट्रेलियाका केही क्षेत्रहरुले आगामी निर्वाचनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने देखिएको छ ।
संघीय संसदको बनोट
अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय संसद दुई सदनात्मक छ । हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभको सदस्य संख्या एक सय ५० रहेको छ । पदाधिकारीहरुको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ । सिनेट सदस्यहरुको संख्या ७६ रहेको छ । जसमा प्रत्येक ६ राज्यबाट १२ जना र दुइवटा टेरीटोरी बाट २ जना गरी ७६ जनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
यस पटक प्रधानमन्त्री टनबुलले ताजा जनादेशमा जाने भन्दै दुवै सदन भंग गरेर जुलाई २ का लागि चुनाव घोषणा गरेका थिए ।
‘बलियो र नवीन अर्थतन्त्रका लागि योजना’ भन्ने मुल नाराका साथ सत्तारुढ लिवरल पार्टीले देशब्यापी रुपमा चुनाव प्रचार गरिरहेको छ । नवीनतम आविष्कार तथा विज्ञान, स्वदेशमै डिफेन्स इन्ड्रष्ट्री सम्बन्धि कार्यक्रमहरु, निर्यातमुखी ब्यापार, साना ब्यवसायीका लागि करमा छुट र सहुलियत, बचत र नाफामुखी बजेट, स्वास्थ्य, शिक्षा र सडकजस्ता पूर्वाधारमा बजेटको ग्यारेन्टीजस्ता मुख्य एजेण्डा लिएर लिवरल पार्टी चुनावमा होमिएको छ ।
नेपालीलगायत आप्रवासी समुदाय पनि विस्तारै साना ब्यवसायमा लागेकाले लिवरलको कर छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी योजनाबाट लाभ पाउने देखिन्छ । साथै, लिवरलले अस्ट्रेलियामा बस्दै आएका आप्रवासी समुदायको परिवार मिलनको लागि अभिभावकहरुलाई ५ वर्ष सम्मको भिसा दिने नीति प्रस्ताव गरेको छ ।
विपक्षी लेवर पार्टीले भावि प्रधामन्त्रीको रुपमा बलि सर्टनलाई अघि सारेको छ । लेबर पार्टीले एक सय नीतिहरु सहित चुनावी प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । लेबरले मुख्यत लिभरलको योजनाको प्रतिवाद गर्ने र आप्रवासी जनता र न्यून आय भएकाहरुका लागि राम्रा योजनाहरु ल्याउने खालका नीति अघि सारेको छ । खासगरी रोजगारीको सिर्जना र शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगानी बढाउने लेबर पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
टोनी एबर्टको नेतृत्वको सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालवालिका, युवाको हितमा रहेका कल्याणकारी कार्यक्रमहरु कटौती गरेको थियो । लेबर पार्टीले त्यसको विरोध गर्दै लगानी बृद्धी, मेडिकेयर, विद्यालय शिक्षाबारे गोन्स्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलगायतका मुद्धाहरुलाई लेबरले अघि सारेको छ । नेपाली लगायतका आप्रवासी समुदायका सदस्यहरु लेबर पार्टीको सरकारले नागरिकको न्युनतम आवश्यकता पुरा गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त र कार्यक्रमबाट लाभ पाउने देखिन्छ । लेबरले आप्रवासी समुदायको परिवार मिलनको लागि अभिभावकहरुलाई ३ वर्षसम्म लगातार बस्न पाउने भिसा दिने नीति प्रस्ताव गरेको छ ।
संघीय चुनावमा नेपाली चासो
अस्ट्रेलियामा निकै पछि आएर पनि बलियो आधार बनाउन सक्षम नेपाली समुदाय विस्तारै राजनीतिक पहुँच बढाउने क्रममा छ । संघीय चुनावको प्रचार—प्रसार र उम्मेदवारसँग आफ्ना मागहरु राख्न अहिले देशैभरि नेपाली समुदाय सक्रिय भएको देखिन्छ । साथै पछिल्लो समय नेपालीहरुले देश चलाइरहेका लिबरल र लेबर पार्टीहरुमा आफ्नो उपस्थिति स्थापित गरिरहेका छन् । लिबरल पार्टीले नेपालीहरुका लागि ‘लिबरल फ्रेण्ड्स अफ नेपाल’ नै गठन गरेको छ भने लेबर पार्टीले पनि ‘लेबर फ्रेण्डस् अफ नेपाल’ हालै गठन गरेको छ । गोवा कटुवाल र गणेश केसी लेबर फ्रेण्डस् अफ नेपालको सम्पर्क ब्यक्ति तोकिएका छन् । श्री नापित ‘लिबरल फ्रेण्ड्स अफ नेपाल’ का संयोजक हुन् ।
नापितको अनुभवमा अहिले सरकारले गर्ने विभिन्न संघीय तथा राज्यस्तरीय निर्णयहरुमा नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरुसँग परामर्श लिने चलन बढेको छ । नापित भन्छन्, ‘लिबरल पार्टीले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने व्यवसायी मैत्री नीति ल्याएको छ । यस्तो नीति अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरुका लागि सहयोगी बन्न सक्छ ।’
नेपाली समुदाय अस्ट्रेलियामा अझै नयाँ छ । वर्किङ फेमेलीहरु भएकोले राज्यको सुविधा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । लेबर फ्रेण्डस् अफ नेपालका कन्भेनर गोवा कटुवाल भन्छन्, ‘सामाजिक कल्यानका कार्यक्रम कार्यक्रम ल्याएर वर्किङ फेमेलिलाई सर्पोट गर्नु लेवर सरकारको महत्वपूर्ण नीति हो । लेवर पार्टीमा नेपाली जस्तै अन्य देशका ‘माइग्रेन्ट’को ठूलो हिस्सा रहेको छ । पार्टीले लोकल काउन्सिलदेखि सिनेटसम्म ‘माइग्रेन्ट’हरुलाई अवसर दिएको छ ।’
नेपाली समुदायका धेरैजसो सदस्यहरु लेवर पार्टीप्रति अलि नरम देखिन्छन् । नेपाली समुदायका अगुवाहरुले लेबर पार्टीको बारेमा सधै सकारात्मक कुरा मात्र गरेकाले पनि यो धारणा बन्न गएको लिभरल फ्रेण्डस् अफ नेपालका सदस्य डा. घनश्याम चापागाई बताउँछन् । तर, पनि अस्ट्रेलियामा दशकांैसम्म रहेको स्वेत नीति हटाएर एसिया र अन्य महादेशका नागरिकलाई स्वागत गरेको जस लेवर पार्टीलाई नै जान्छ । साथै, नेपाली जस्तो मध्यम वर्गीय समुदाय जसलाई राज्यको साथ र लेवरले अघि सारेको लोक कल्याणकारी कार्यक्रमले सुरुका वर्षहरुमा बसोवासका लागि मद्धत पुग्ने देखिएको लेबर फ्रेण्डस् अफ नेपालका कन्भेनर गणेश केसीले बताए ।
झट्ट हेर्दा केवल दुई मुख्य दल लेबर र लिबरल तथा ग्रीन पार्टी मात्रै अस्ट्रेलियामा सक्रिय रहेजस्तो देखिए पनि नेपालमा जस्तै यहाँ पनि झण्डै ४ दर्जन भन्दा बढी पार्टीहरु सक्रिय छन् । तर, निर्वाचनमा अन्य सबै पार्टीहरु आ–आफ्नै मुद्धाहरुमा र सीमित क्षेत्रहरुमा मात्रै अस्तित्वको प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
धुमपान गर्न पाउनु पर्ने माग राख्ने ‘स्मोकर्स राइट्स पार्टी’, स्वेच्छाले मृत्यु रोज्न पाउनुपर्ने अधिकारको वकालत गर्दै ‘भोलुन्टरी युथनेशीया पार्टी’ तथा गाँजाको ओसार–पसार र सेवनलाई कानुनी मान्यता दिँदै त्यसबाट राजस्व असुली गर्नुपर्ने, समलिंगी विवाहलाई मान्यता, गर्भपतन गर्न चाहनेहरुलाई कुनै झन्झट दिन नहुनेलगायत नीतिहरुको वकालत गर्ने ‘अस्ट्रेलियन सेक्स पार्टी’ लगायतका पार्टीहरु पनि अस्ट्रेलियामा छन् ।
यसैगरी, पशु अधिकारको वकालत गर्ने ‘एनिमल जस्टीस पार्टी’, खेलकुदको प्रवद्र्धन गर्न ‘अस्टे«लियन स्पोर्टस पार्टी’, अस्ट्रेलियाका धनी व्यवसायी क्लाइभ पाल्मरले नेतृत्व गरेको ‘पाल्मर युनाइटेड पार्टी’, ‘आवर नेशन पार्टी’, ‘नो कार्बन ट्याक्स पार्टी’, ‘फ्यामिली फष्ट पार्टी’, ‘बुलेट टे«न फर अस्ट्रेलिया’, बैकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि ‘ब्याङ्क रिफर्म पार्टी’लगायत दर्जनौँ पार्टीहरु रहेका छन् ।
अस्ट्रेलियाको कानुनअनुसार मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएका सबैले मतदानमा भाग लिनुपर्छ अर्थात् अनिवार्य मतदानमा सहभागी हुनुपर्छ । अन्यथा उचित कारण नदेखाएमा २० डलर देखि ५० डलरसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ । यदि मतदानमा सहभागी हुन नसक्ने कारण उपयुक्त नदेखिएमा अदालतमा समेत जानुपर्छ । १८ वर्ष उमेर पुगेका अस्ट्रेलियन नागरिकले मतदानमा सहभागी हुन पाउँछन् ।
त्यसो त देशबाहिर रहेका, मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग, सोही दिन काममा जानुपर्नेहरुका लागि प्रि–पोलको ब्यवस्था गरिएको छ । हुलाकमार्फत् वा घुम्ती मतदान केन्द्रमार्फत् मत दिन पाउने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
Previousमुस्ताङमा भेटियो युरेनियम,पेट्रोल र नूनको खानी
Nextगिरिजाप्रसादलाई कांग्रेसले वेवास्ता गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासो
मेलबर्नमा गहना पसलमा दिउँसै डकैती
१९ असार २०७३, आईतवार १५:२८
मकवानपुर कम्युनिटी अस्ट्रेलियाको पहिलो अधिवेसन सम्पन्न
१ भाद्र २०७७, सोमबार ०३:१८